नारायणहिटीमा ओलीलाई भब्य स्वागत गरिँदै, सभास्थलमा ओली पुग्नै लाग्दा यस्तो देखियो !Kp Sharma Oli. | Public 24Khabar
Home News नारायणहिटीमा ओलीलाई भब्य स्वागत गरिँदै, सभास्थलमा ओली पुग्नै लाग्दा यस्तो देखियो !Kp...
वैशाखदेखि पारिश्रमिक नपाएपछि त्यहाँ कार्यरत प्राध्यापकहरू आन्दोलनमा छन् । गत पुस १३ देखि आफूहरू कलेज जान छाडेको डा. प्रणित पोखरेलले जानकारी दिए । वैशाखदेखि नै अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरे पनि कलेजले न्यूनतम पारिश्रमिकसमेत उपलब्ध नगराएको प्राध्यापकहरूले गुनासो गरे ।
१८ प्राध्यापक कलेज नगएपछि पठनपाठन प्रभावित बनेको विद्यार्थीहरूले बताए । ‘चैतदेखि लकडाउन भयो, वैशाखदेखि अनलाइन कक्षा लिएका थियौं,’ पोखरेलले भने, ‘पुसमा तलब पठायो तर आफ्नै हिसाबकिताबले कलेज गएको दिन गन्ती गरेर ज्यालादारीका आधारमा तलब दिइयो ।’ अनलाइनबाट पठनपाठन गराउँदा कलेजले तलब सुविधा दिन कन्जुस्याइँ गरेको उनीहरूको भनाइ छ ।
कलेजका विद्यार्थी पनि बढी शुल्क लिएको विषयमा आन्दोलित छन् । शुल्क फिर्ताका लागि उनीहरूले हस्ताक्षर संकलन गरेर कलेज प्रशासनलाई बुझाउने तयारी गरेका छन् । कान्तिपुर डेन्टल काठमाडौं विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन पाएको निजी कलेज हो । प्राध्यापकहरूलाई तलब नदिइएकामा विश्वविद्यालयको मेडिकल साइन्स फ्याकल्टी काउन्सिलले विरोध जनाएको छ । कोरोनाको महामारीमा पनि काम गरेका स्वास्थ्यकर्मीलाई सेवा सुविधा नदिइएकामा फ्याकल्टीका अध्यक्ष डा. मनोज हुमागाइँले असन्तुष्टि जनाए । कलेजका प्राध्यापकहरूको आन्दोलनमा काउन्सिलले ऐक्यबद्धता जनाएको छ ।
पुस १३ देखि आन्दोलन थालेका उनीहरूलाई प्रशासनले वैशाखको पारिश्रमिक दिएर वार्तामा बोलाएको थियो । उक्त वार्तामा कलेजका अध्यक्ष श्रेष्ठ उपस्थित भएनन् । कलेज सञ्चालक नै उपस्थिति नहुँदा वार्ता विफल भएको कलेजले जनाएको छ । ‘तलब दिन पनि मोलमोलाइ गरिएको छ,’ पोखरेलले भने । अहिले कलेजमा परीक्षा सञ्चालन भइरहेको छ । पारिश्रमिक नपाए प्रयोगात्मक परीक्षामा सहभागी नहुने प्राध्यापकहरूले बताएका छन् ।
Previous articleआफनै दाई नाता पर्नेको पेट बोके पछि जन्मेको ब*च्चा लाई जि*उदै खोल्सामा फा लिन। Pyuthan News
Next articleबधाई छ दुई जना लाई राहुल स्मिता लाई अनि पुन मिलन गराई दिनु हुने हाम्रो kapaur Bot मिडिया सन्तोष देउजा सर लाई धन्याबाद